I-Linux Foundation Yethule i-ACRN 1.2 Hypervisor | Kusuka kuLinux
ILinux Foundation yethule i-ACRN 1.2 Hypervisor
Ezinsukwini ezithile ezedlule iLinux Foundation yethule uhlobo olusha lwe-ACRN 1.2 hypervisor okuyinto uyiHypervisor ekhethekile futhi yakhelwe ukuze isetshenziswe kubuchwepheshe obushumekiwe nakumadivayisi we-Inthanethi Yezinto (IoT). Ihypervisor ibhalwe ngomsebenzi wesikhathi sangempela engqondweni futhi ifanele ukusetshenziswa ezinhlelweni ezibucayi, lapho kusebenza amaqembu anezinsizakusebenza ezilinganiselwe.
Iphrojekthi izama ukuthatha indawo phakathi kwama-hypervisors asetshenziswa ezinhlelweni zefu kanye nezikhungo zedatha nama-hypervisors wezinhlelo zezimboni ngokuhlukaniswa okuqinile kwemithombo. Amayunithi wokulawula nge-elekthronikhi, amadeshi, nezinhlelo zolwazi lwezimoto zikhonjwe njengezibonelo zokusetshenziswa kwe-ACRN, kepha i-hypervisor nayo ilungele amadivayisi we-IoT wabathengi nezinye izinhlelo zokusebenza ezishumekiwe.
I-ACRN inikeza ngaphezulu okuncane futhi iqukethe kuphela imigqa eyizinkulungwane ezingama-25 yekhodi (uma kuqhathaniswa, ama-hypervisors asetshenziswa ezinhlelweni zefu amelela cishe imigqa eyizinkulungwane eziyi-150 yekhodi).
Ngasikhathi sinye, i-ACRN iqinisekisa ukubambezeleka okuphansi nokuphendula okwanele lapho uxhumana neqembu.
Ngakolunye uhlangothi it isekela ukubonwa kwemithombo ye-CPU, okokufaka / okukhiphayo, i-network subsystem, ihluzo nokusebenza kwemisindo, ngaphezu kweqoqo labaxhumanisi bokufaka / bokukhipha bokufinyelela ngokuhlanganyela kuzinsizakusebenza ezivamile kuyo yonke imishini ebonakalayo.
I-ACRN ibhekisa ohlotsheni lokuqala lwe-hypervisor (isebenza ngqo ngaphezulu kwehadiwe) futhi ikuvumela ukuthi ngasikhathi sinye usebenzise izinhlelo eziningi zezivakashi ezingasebenzisa i-Linux, i-RTOS, i-Android, nokunye ukusatshalaliswa kohlelo lokusebenza.
Iphrojekthi enjalo inezinto ezimbili eziyinhloko: eyodwa leyo i-hypervisor futhi i enye i- imodeli yedivayisi ihlobene nesethi ebanzi yabaxhumanisi bokufaka / bokukhipha abahlela ukwabelana ngamadivayisi phakathi kwezinhlelo zezivakashi.
I-hypervisor ilawulwa kusukela ohlelweni lokusebenza lwensizakalo, olusebenza njengohlelo lokusingathwa futhi luqukethe izinto zokudlulisa izingcingo ezivela kwezinye izinhlelo zezivakashi ziye kumakhompyutha.
Ngaphakathi izici zayo eziyinhloko okulandelayo kugqama:
Kwenzelwe amadivayisi anezinsizakusebenza ezikhawulelwe
Ambalwa imigqa yekhodi (i-LOC) evela ku-hypervisor: I-25K vs. I-156K LOC yama-hypervisors wedatha yedatha yedatha.
Ivumela isikhathi sokuqalisa esisheshayo
Ithuthukisa ukuphendula okuphelele ngokuxhumana ngehadiwe
Yakhelwe i-IoT eshumekiwe
I-Virtualization engaphezu kwe-CPU, I / O, amanethiwekhi, njll.
Ukusebenziseka kwamehlo kwemisebenzi yokuthuthukisa ye-IoT eshumekiwe, okuyi: ihluzo, izithombe, umsindo, njll.
Qedela isethi yabalamuli be-I / O yokwabelana ngamadivayisi kumishini eminingi ebonakalayo
Ukusekelwa kwesistimu yokusebenza okuningi kwezinhlelo zokusebenza zezivakashi ezifana neLinux ne-Android
Kusebenza ezimweni eziningi zokusebenzisa
Ukonga okubalulekile ku-R & D nezindleko zentuthuko
Ikhodi yokubonisa ngale
Ukuthuthukiswa kokusebenzisana kwesoftware nabaholi bemboni.
Amalayisense we-BSD avumayo
Imithwalo yemisebenzi yezokuphepha ebaluleke kakhulu ibaluleke kakhulu
Ukuhlukaniswa kwemithwalo yemisebenzi ebaluleke kakhulu kwezokuphepha.
Le phrojekthi yakhiwe kucatshangelwa ukuphepha okubalulekile emsebenzini
Yini okusha ku-ACRN 1.2
Kulokhu kukhishwa okushaKuvezwa ikhono lokusebenzisa i-firmware ye-Tianocore / OVMF njenge-boot loader ebonakalayo yohlelo lokusebenza lwensiza (uhlelo lokubamba) olungasebenzisa i-Clearlinux, i-VxWorks, ne-Windows. Imodi ye-Boot Verified (Safe Boot)
Ngaphandle kwalokho Onjiniyela basebenze ekusekeleni iziqukathi ze-Kata. Ngenkathi izinhlelo zezivakashi zeWindows (WaaG), umxhumanisi engeziwe ukufinyelela isilawuli se-USB host (xHCI) kanye ne-Virtualization Always Running Timer (ART) ingeziwe.
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukuhlola i-ACRN kubalulekile ukuthi bazi ukuthi kufanele okungenani babe nalezi zidingo ezilandelayo:
Iprosesa engama-86-bit x64
Imemori ye-4GB RAM
I-64-core 4-bit processor
Imemori ye-8GB RAM
Ungathola imibhalo ehambisanayo kanye nemininingwane mayelana nehardware esekelwa ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » ILinux Foundation yethule i-ACRN 1.2 Hypervisor
Ukusatshalaliswa kwamahhala kwe-Linux okungama-100%: Ukuba noma ukungabi khona? Le yinkinga!
I-Cruftbuster: gcina uhlelo lwakho luhlanzekile futhi luhlelekile